Sida loo Guba Spotify in CD Si fudud
> Resource > Beddelaan > Sida loo Guba Spotify in CD
Dad badan ayaa soo dhibtay oo dhibaatadan in Spotify waa inta badan adeegga copyright ilaaliyo a music geeyo inta aad ma ay maqli karaan si Spotify geeyo music offline. Sidaas muuqata, waa fikrad wanaagsan in aad ku gubi music Spotify in CD ah ee loo maqli habboon, gaar ahaan marka aad kartaa in aan lagu xiran internetka.
Si aad u gubi Spotify in CD, dhibaatana dhabta ah aad la kulmi kartid waa in ay qaataan music Spotify ka baxsan goobta. Ha welwelin. Waxaan marka hore ku talin doonaa 4 qalab inay muusikada Spotify. Ka mid ah qalabka lagu taliyey, Wondershare TunesGo ma qoraan kaliya karaa music Spotify laakiin sidoo kale gubi music inay CD. Bal aan marka hore ku arki sida loo isticmaalo TunesGo Wondershare u Mac ay gubaan Spotify in CD dabadeedna waxaad dooran kartaa qalab kale lagu duubo heesaha iyo muusiga gubi in CD via Lugood.
# 1. Wondershare TunesGo u Mac
1. Si toos ah kala soo bixi music Spotify la eber tayada khasaaro
2. Aqoonso info song, oo ay ku jiraan song horyaalka, farshaxanka album oo dheeraad ah.
3. Download oo dhan playlists Spotify iyo heeso kala toos ah
4. Jadwalka inaad kala soo baxdo iyo shaandhayso xayeysiis
5. Gubashada diiwaan music inay CD aan ka kaaftoomi
Sida loo download music Spotify iyo gubi in CD
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo Wondershare ah
Ku rakib barnaamijka on your computer iyadoo la isticmaalayo download ka link hore si ay u soo bixi.
Tallaabada 2. Start inay muusikada Spotify
Si aad u bilaabaan, raadi badhanka leh taariikhqorihii ku saabsan suuqa kala hoose gaar ahaan qaybta bidix iyo sare.
Next, baadhidooda iyo ciyaaro hal online habayn Spotify. Duubo ayaa si toos ah dhamaan doonaa sida ugu dhakhsaha badan habayn Spotify la ciyaaray ugu shishaysa. Si loo hubiyo tayada sare oo buuxi Gurtida duubay, laxanka Spotify la diiwaangeliyey waa in la ciyaaro si habsami leh.
Tallaabada 3. Gubashada Spotify music inay CD
Tallaabada koowaad qofku ku doonayo in tab ee Library markaas raadinayay Music Toolkit CD gubi.
Geli CD maran kadib markii double-gujinaya gubi CD ah. Next, jiididda iyo hoos u Gurtida ka maktabadda jidka oo dhan xagga daaqaddii u CD gubi. Ka dib markii ay taasi la qabtay, guji Guba si ay u bilaabaan habraaca. Simple, sax?
Rikoorrada kale Spotify music
Deezify waa kordhin Chrome kaas oo u saamaxaya in aad kala soo bixi music ka dhowr ah oo ay ka mid websites Spotify iyo Deezer. Waxaa aad u haboon in aad isticmaasho Deezify inay muusikada ka Spotify. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo soo dajiyo kordhin this on Chrome iyo muusig Spotify ee browser. Markaas Deezify soo bixi doona music aad u.
# 3. dhiiran
Dhiiran waa editor il audio furan iyo recorder.It kuu ogolaanayaa inaad u qortid cod si toos ah iyo loo maqli karo computer. Sidaas waxa kale oo ku haboon si ay u qoraan audio online ka websites sida Spotify. Ka dib music waxaa lagu diiwaangeliyaa, waxa kale oo aad edit karaa in barnaamijkan iyo badbaadin regelingen ama faylasha AIFF.
Isku day inaad dhiiran >>
Spoty-mp3.com waa adeeg internetka ah oo awood aad kala soo bixi music Spotify in MP3 files. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay galaan ay website iyo paste url oo ka mid ah heesaha Spotify in sanduuqa. Markaas riix Search on xaq u leeyihiin inay bilaabaan falanqeeyo url ah. Ugu dambeyntii, liiska song la Download badhamada muuqan doonaa in aad dooratid u dajinta. Fiiro gaar ah: Website-kani waxa uu dayn inay shaqeeyaan sababo qaar ka mid ah iyo haddii ay mar kale ka shaqeeya, waxaan kugu dhawri doonaa updated.
Isku day Spoty-mp3.com >>
Is barbar dhig 4 Tools in Download Spotify Music
Wondershare TunesGo u Mac
Adeegga Type Software Desktop Addoon Browser Software Desktop adeeg online
Hawlaha Main Duubista Online Dajinta audio Online Tafatirka Audio iyo duubista Spotify music dajinta
1: 1 Good Audio Quality
Guba muusigga in CD
Sifeey baxay Ads
Aqoonso Song Info
Jadwalka in Record
Easy in la isticmaalo
Bedelka in Lugood leh 1 Click
1. wax khasaare ah oo tayo leh audio
2. qaab deggan
3. updates barnaamij joogto ah
4. taageero dhan daalacashada
1. hawlaha tafatir dheeraad ah
1. ma u baahan tahay si loo soo dajiyo
2. taageero dhan daalacashada
1. aan lacag la'aan ah
1. aan xasillooneyn oo u baahan taageero Java
2. sheegay isticmaalayaasha in ay codsiga virus
3. taageero Chrome oo kaliya
1. aan xasillooneyn
2. ma joogto updates
3. ma fududahay in la isticmaalo
2. muuqaalada yar
Laga soo bilaabo miiska is barbar kor ku xusan, waxa aan arki karnaa in TunesGo Wondershare ah waa in qalab ku haboon si ay u soo bixi music Spotify. Waxa kale oo muhiim ah, waa barnaamij dhan-in-mid kuu ogolaanaya inaad si ay u gubaan music Spotify in CD aan ka kaaftoomi.